Qof kastaa wuu xisaabtamayaa! Tirinta Wadooyinka 2022 Waxaa loo qorsheeyay Janaayo 26, 2022 - Wadashaqeynta Tucson Pima si loo soo afjaro guri la'aanta
by	Jason Thorpe	/ Jimco, December 24, 2021	/ Published in Community, Featured, Hada Farxad
Tabarucayaasha Loo Baahan Yahay 2022 Tirinta Waddada Degmada Pima
Janaayo 26, 2022 (6am-11am)
Maanta iska diiwaan geli http://www.bit.ly/everyone2022
Ku saabsan Tirinta Wadooyinka
Sannad kasta inta lagu jiro dhammaadka Janaayo, TPCH waxay qabataa tirinta hal habeen oo dadka ay la kulmaan hoy la'aan gudaha Degmada Pima. Mid ka mid ah qayb ka mid ah Point in Time Tirinta waa tirinta waddooyinka, oo maxalli ahaan loogu yeero Qof kasta ayaa wax tirinaya! Inta lagu jiro tirinta waddooyinka, kooxaha iskaa wax u qabso ee bulshada ayaa la shaqeeya bixiyeyaasha adeegga iyo kooxaha wacyigelinta waddooyinka si ay u helaan dadka aan guri lahayn oo ay weydiiyaan su'aalo sahamin ah oo taxane ah. Jawaabaha sahanka waxay caawiyaan bixinta macluumaad qiimo leh, adeegyo taageero toos ah iyo ogeysiinta go'aamada maalgelinta ee bulshadayada iyo wixii ka dambeeya. Kuwa seexda hoyga habeenkii, hoyga degdega ah, iyo guryaha ku meel gaadhka ah waxa lagu tiriyaa nidaamka macluumaadka maaraynta hoylaawayaasha (HMIS) isla habeenkaas.
Helitaanka dad ka tirsan gobolkayaga oo aan guri lahayn maalin keliya waa hawl aad u weyn! TPCH waxay isku xidhaa daraasiin hay'ado maxali ah waxayna qortaa boqolaal tabaruceyaal ah si ay u gaadhaan yoolalka mashruuca. Goobaha bixiya adeegyada dadka laga yaabo inay la kulmaan guri la'aan ayaa sahaminaysa macaamiishooda. Intaa waxaa dheer, TPCH waxay martigelisaa dhacdo tiro koob gaar ah oo loogu talagalay dadka da'da yar ee la kulma hoy la'aanta isla maalintaas.
Iyadoo la eegayo faafitaanka faafa ee COVID-19, TPCH waxay qaadaysaa dhawr taxaddar oo dheeraad ah si ay u ilaaliso iskaa wax u qabso Tirinta Waddooyinka iyo derisyadayada aan guri la hayn. Dhammaan mutadawiciinta ayaa looga baahan doonaa inay xidhaan maaskaro wajiga, oo ay ku celceliyaan fogeynta bulshada ilaa iyo inta ugu badan ee suurtogalka ah, oo ay si buuxda uga talaalaan COVID-19. Intaa waxaa dheer, tirinta sanadkan waxay isticmaali doontaa arjiga sahanka elegtarooniga ah, kaas oo si fudud looga heli karo talefannada casriga ah ee mutadawiciinta ama tablet-yada, halkii laga isticmaali lahaa foomamka waraaqaha.
Isdiiwaangeli si tabaruc ah
Haddii aad awoodo inaad ku caawiso tirinta dadka, waxaanu u baahanahay caawimadaada. Waxaad heli doontaa tababar ka hor tirinta waxaana lagugu lamaanayn doonaa koox ay ku jirto hogaamiye kooxeed khibrad leh. Waayo-aragnimo hore looma baahna.
Dhammaan tabaruceyaasha waa inay ahaadaan da'da 18 ama ka weyn.
Dhammaan mutadawiciinta waa in si buuxda looga tallaalaa COVID-19. Si buuxda loo tallaalay macnaheedu waa in aad qaadatay hal-dose tallaalka Johnson & Johnson ama qiyaastaada labaad ee laba-dose tallaalada Moderna ama Pfizer January 12, 2022 ama ka hor (2 toddobaad ka hor dhacdada).
Dhammaan mutadawiciinta ayaa looga baahan yahay inay ka qaybqaataan tababbarka khadka tooska ah ka hor dhacdada.
Dhammaan mutadawiciinta waa inay ka go'an tahay inay la soo xiriiraan dadka ay haysato hoy la'aanta iyagoo ka yimid meel naxariis iyo faham.
Iska diwaangeli si aad tabaruc ugu noqoto http://www.bit.ly/everyone2022
Dhammaan mutadawiciinta ayaa laga rabaa inay ka qaybqaataan mid ka mid Tababbarka tabaruce inta lagu jiro mid ka mid ah waqtiyada soo socda:
Talaado, Janaayo 11, 2022 laga bilaabo 5:30pm-6:30pm (Sida loo maro Zoom)
Arbacada, Janaayo 19, 2022 laga bilaabo 9:00 subaxnimo-10:00 subaxnimo (Sida loo maro Zoom)
Dalabka tooska ah ee shabakada TPCH (la heli karo Janaayo 12, 2022)
Tababarku wuxuu ku siin doonaa fursad aad ku barato:
Maxaa la filayaa subaxda tirinta?
Sida loo isticmaalo app-ka sahanka ee talefanka casriga ah?
Sida loo sameeyo sahan lala yeesho qof ay haysato guri la'aan?
Tani waa fursad qaali ah oo aad ku tabarucdo hal maalin, tus roonaanta deriska aan guri lahayn, oo ay gacan ka geysato tirinta saameynaysa adeegyada iyo maalgelinta. Fadlan nagu soo biir!
Su'aalo? Fadlan iimayl u dir qof walbacounts@tpch.net